မွေးနေ့မှာ ဘုရားသွား ကုသိုလ်ယူနေတဲ့ ဂွမ်းပုံလေး
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း အလှူလေးတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီနေ့က ဂွမ်းပုံလေးရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ အလှူအတန်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းဖြစ်နေသလို ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ (၇) ရက်သားသမီး တွေအတွက် ရည်စူးပြီးတော့လည်း အလှူတွေ လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
Photo : ဂွမ်းပုံ FB
ဒီနေ့(သြဂုတ်လ၃၁ရက်)က သရုပ်ဆောင် ဂွမ်းပုံလေးရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂွမ်းပုံလေးဟာ မွေးနေ့မှာ ဘုရားသွား ကုသိုလ်ယူခဲ့ပြိး ပရိသတ်တွေနဲ့ (၇)ရက်သားသမီးတွေ အတွက် ရည်စူးပြီး အလှူအတန်းတွေ လည်း ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူမပြုလုပ် တဲ့ အလှူလေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေကို အမျှပေးဝေထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
"ဒီကနေ့( August လ.31.ရက်)ရက်နေ့ဂွမ်းဂွမ်းရဲ့မွေးနေ့မှာ.(အန္တောအနန္တငါးပါးကိုရည်စူး၍.ချစ်သော.၇.ရက်သားသမီး.ချစ်ပရိတ်သတ်များ ကိုရည်စူး၍. .ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးတွင်..အလှူဒါနလေးပြုခဲ့ပါသည်. .(နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်)" ဆိုပြီး သြဂုတ်လ(၃၁) ရက်နေ့က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ထို့နောက် မိသားစုနဲ့အတူ အိမ်မှာ မွေးနေ့ကိတ်ခွဲက မိသားစုမွေးနေ့ပွဲလေး ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်နေတဲ့ ဂွမ်းပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြပါတယ်။ ဂွမ်းပုံလေးဟာ မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာလည်း သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ အေးချမ်း အောင်မြင် အုတ်ခွက်ဘုရားကြီးကို ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ မွေးနေ့ရက်မတိုင်ခင် လာရောက် ပူဇော်သူတွေကိုလည်း အအေး၊ မုန့်တွေနဲ့ ဧည့်ခံခဲ့ပါသေးတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ Surprise ကြောင့် ပျော်ခဲ့ရတဲ့ ဂွမ်းပုံ
ဂွမ်းပုံလေးရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းကတော့ အရမ်းကို ကြာနေပါပြီ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အဖြူအမည်း ခေတ်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အိမ်အကူ ကာရိုက်တာ၊ မင်းသမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းနေရာ၊ အဒေါ်နေရာ၊ အမေ နေရာ နဲ့ အစ်မကြီး နေရာတွေမှာ အများဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသူဖြစ်ပါတယ်။